android ဖုန်းအဘို့ရဲရင့် Browser ကို APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » ရဲရင့် Browser ကို
ရဲရင့် Browser ကို APK ကို
ရဲရင့်သော web Browser ကို built-in AdBlock, ခြေရာခံခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် optimized အချက်အလက်များနှင့်ဘက်ထရီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ Android အတွက်အစာရှောင်, အခမဲ့, လုံခြုံ web browser ကိုဖြစ်ပါတယ်။Fast & Security
စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ် configure လုပ်ဖို့ပြင်ပ plugins ကိုသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ချက်များမရှိပါ! ရဲရင့်ရိုးရှင်းစွာ Android အတွက်ရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးနှင့်လုံခြုံမှုအရှိဆုံး browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။ သငျသညျသည် popups, malware နဲ့အခြားအနှောငျ့အယှမရှိဘဲလျှပ်စီးအစာရှောင်ခြင်း browsing အတွက်ပျော်မွေ့နိုင်အောင်သတ္တိ, အမြန်နှုန်းနှင့်လုံခြုံရေးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီ & အချက်အလက် Optimizer
ရဲရင့်စာမျက်နှာတင်အချိန်လျော့ကျစေပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်, နှင့် malware ကူးစက်ကြော်ငြာများမှအစောင့်။ ရဲရင့်ကို Android ပေါ်မှာ 2x 4x မှမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်သင်ဘက်ထရီများနှင့်ဒေတာအစီအစဉ်စားသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုက်ရိုက်လျှော့ချရေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သတ္တိလည်းထိုကဲ့သို့သော HTTPS Everywhere ကို (encrypted data တွေကိုအသွားအလာ), script ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း, 3rd ပါတီ cookie ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကရုပ်ဖျက် tabs များအဖြစ်ဦးဆောင် privacy နဲ့လုံခြုံရေး features တွေနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
* လုပ်ကွက်တဲ့ pop-ups
* ဘက်ထရီ optimization
* Data နှင့်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်
(လုံခြုံရေးအတွက်) နေရာတိုင်းမှာ * Https
* 3rd ပါတီ cookie ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း
* ပုဂ္ဂလိက tabs များ
* မကြာသေးမှီက tabs များ
လွယ်ကူသော! ခြင်္သေ့ဦးခေါင်းအပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် Brave Shields ရှာဖွေတွေ့ရှိ, သင်ပိတ်ဆို့ဖို့ရာဆိုဒ်များဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်နှုန်း-site ကို setting များကိုရှိသည်သော။
ကျနော်တို့အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်ကြော်ငြာဝင်ငွေရှယ်ယာကြီးထွားလာနေချိန်တွင်, အသုံးပြုသူများအတွက် browsing အတွက်အမြန်နှုန်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကို web ကိုကယ်တင်မယ့်မစ်ရှင်ရှိသည်။
ဝဘ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရာအရပျဖြစ်လာသည်။ ထိန်းချုပ်မှုထဲကကြော်ငြာ-နည်းပညာဂေဟစနစ်နှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများကိုပုန်ကန်ခဲ့ကြပြီးကြော်ငြာကိုပိတ်ပင်ထားသည်၎င်းတို့၏ browsing အတွက်အမြန်နှုန်း, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် privacy ကိုတိုးတက်အောင်ရွေးချယ်မှုအသစ်ကလက်နက်ဖြစ်လာသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဘယ်သူမှအနိုင်ရရှိရှိရာအောက်ဆုံးတစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်ဦးတည်းရလဒ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း။ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဟာသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်ငွေရှာရန်အဘို့အနိုင်စွမ်းမရှိပါကအသုံးပြုသူများလက်ရွေးချယ်ဖို့ထိန်းချုပ်ထားရင်းမြစ်များမှအကြောင်းအရာဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရ, browse မှနည်းပါးလာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများနှင့်ကြေညာသူအစာရှောင်ခြင်း, လုံခြုံ browsing အတွက်ပွင့်လင်းကို web များအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုသည်အဘယ်မှာရှိပိုကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်, ပေးရ micropayments အတူအွန်လိုင်းကြော်ငြာဂေဟစနစ်အသစ်တစ်ခုဝင်ငွေ-sharing ဖြေရှင်းချက်အသွင်ပြောင်းဖို့သတ္တိရည်ရွယ်ချက်။
built-in AdBlock, ခြေရာခံခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် Brave web browser ကိုနှင့် optimized အချက်အလက်များနှင့်ဘက်ထရီအတှေ့အကွုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, https://www.brave.com သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး
မှတ်စု: Android အတွက်သတ္တိသတ္တိရဲ့ tab ကို-based browser ကိုသည်နှင့်သတ္တိ Browser ကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသည် - နောက်ခံစာမျက်နှာများကိုသက်ရောက်ရာ Link ကို Bubble ။
ပံ့ပိုးမှု: သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက support@brave.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ရောက်ရှိဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး
[1.0.21] - ခရိုမီယမ် v58.0.3029.83 မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်။
- အချို့သောဒေသဆိုင်ရာစာရင်းနှင့်အတူရန်လိုပိတ်ဆို့ခြင်းကျော် Fixed ။
ရဲရင့် Browser ကို: Fast Adblock
43.52 ကို MB